Goorta iyo Goobta lagu ciyaarayo kulanka Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ee Carabao Cup oo la shaaciyey – Gool FM
(England) 03 Okt 2019. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa shaaca ka qaaday xilliga la ciyaari doono kulankan adag ee ay wada ciyaari doonaan kooxaha Chelsea iyo Manchester United wareegga afaraad ee Carabao Cup.
Waa kulan ay labada kooxood ku ciyaari doonaan dareen sare oo soo bilowday kulankii furitaanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, markaasoo ay Blues booqatay garoonka Old Trafford.
Waxa uu kulankaasi ahaa mid ay Manchester United 4-0 uga adkaatay Chelsea, waxaana sababta ay haatan xiddigaha uu hoggaamiyo macallin Frank Lampard ay sida weyn u sugayaan inay kulankaasi ka aar-gutaan Red Devils.
Kulankan ayaa qabsoomi doona sida qorshuhu yahay maalin Arbaco ah habeenkeeda oo ay taariikhdu tahay 30-ka bishan October, waxaana uu ka dhici doonaa garoonka Stamford Bridge oo ay iska leedahay Chelsea kaasoo ku yaala galbeedka Magaalada London.
Labada kooxood xaaladooda haatan ma’ahan mid wanaagsan marka loo eego heerka labadoodaba laga filanayey bilowgii kal ciyaareedkan, Blues ayaa ah kooxda wax yar qaab sare ku jirta, marka loo eego Man United oo ku dhow dhanka musiibada.
Saddex ka mid ah kooxaha waa weyn ee Premier League oo ku tartamaya saxiixa xiddiga Real Madrid ee Martin Odegaard